Dal-Dhaweehii Shalay iyo kan Maanta Maxay ku kala Duwaanan Karaan? – Xeernews24
4. Februar 2017 /in Qormooyin/Articles /von admin
Sidda ka Muuqato Qoraalka iyo Qiyaasta hoos ku qoran Dal Dhaweehii Horee wuxuu Gobolka Sitti iyo Dalka Djibouti dhex dubaaxin jirey in ka badan 461 km wuxuuna ka joogsan jiray in ka badan 24 Magaalo oo dhamaantood ay tareen la,aan nololi ka jirayn lagana wada guuri doono sida hadaba jirta.
Dal Dhaweeyahan cusub sida la sheego wuxuu gobolka Sitti ku hagan kara uu qudha meel u jirta ila 10 km magaalada taarrikhga ah ee Hadhagaala,Malkaa-Jabti iyo Biki waa 3 magaalo oo kaliya.
Halka dalka Djiboutina laga guuri doono labada magaalo ee kala ah Gubatto iyo Dhacas-biyo hadayna dawlada Djibouti la iman qorshee labadaa magaalo lagu badbaadin sii jirtaankooga iyadoo faaidad ugu wayn ay nasiib u heshay Tuuladi Shabeeley oo noqotay xundhurta iyo rugta dal dhaweeyaha cusub.
Geesta kale waxaan cidna u maqnayn ceelna u qodnayn Gobolkii Sitti oo dal dhaweeyahan cusub siigo iyo fidho mooye aan wax la taaban karo oo hurumar ah laga arkayn.
1>>o-km -Caasimada Djibouti
Cajiib Gidaar Gaboobay oo 150 sanno iyo in badanba jiray oo hadana la leeyahay... Wargeyska Der Spiegel ee ka soo dalka Jarmalka oo lagu sawiray Trump oo qoorta...